सहरलार्इ हाेइन सरहबासीलार्इ स्मार्ट बनाउनुपर्छ : मेयरका उम्मेदवार पवित्र बज्राचार्य | संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost
सहरलार्इ हाेइन सरहबासीलार्इ स्मार्ट बनाउनुपर्छ
काठमाडौं महानगरपालिकालाई विश्वमा एउटा सांस्कृतिक नगरका रुपमा चिनिन्छ । विश्व सम्पदा सुचीमा रहेका ५ वटा ऐतिहासिक महत्वका धरोहर यहाँ छन् । तिनीहरुको संरक्षण र सम्वर्द्धन अनिवार्य छ ।
सिंगो काठमाडौं महानगरलाई हामीले दुई भागमा बाँडेर बिकास गर्नुपर्छ । काठमाडौंको कोर एरिया, जहाँ ऐतिहासिक सम्पदाहरु रहेका छन्, तिनीहरुको मौलिकतालाई नष्ट गर्नु हुँदैन । तिनीहरुलाई नष्ट गर्नु भनेका आफ्नै नाक काट्नु जस्तै हो ।
भूकम्पका कारण काठमाडौंका धेरै सम्पदाहरु क्षतिग्रस्त भएका छन् । तिनीहरुको मर्मत सम्भार गरेर पुरानै संरचनामा फर्काउनु मेरो प्राथमिकता हुनेछ । स्थानीयवासीको संलग्नतामा पुरानै आर्किटेक्ट अनुसार पुनर्निमाण गरिनेछ ।
दोस्रो भनेको, नयाँ बस्तिहरुको विकास हो । तिनीहरुलाई आधुनिकतातर्फ लैजान सकिन्छ । अहिले स्मार्ट सिटीको कुराहरु आएका छन् । मेट्रो रेल चलाउने कुराहरु आएका छन् ।
मेरो विचारमा सबैभन्दा प्रमुख कुरा शहरलाई स्मार्ट बनाउनुभन्दा पहिले शहरवासीलाई स्मार्ट बनाउनुपर्‍यो । खल्तीमा स्मार्टफोन छ, तर चलाउन जानेन भने त्यसको के अर्थ ?
स्मार्ट शहर भन्नेबित्तिकै के परिकल्पना गरिन्छ भने एउटै कार्डले रेस्टुरेन्ट, ट्याक्सी, पसल सबैतिर काम गरोस् । हातमा एउटा कार्ड भएपछि सबै सुविधाहरु उपभोग गर्न सकियोस् । त्यो भनेको आजको भोलि हुने कुरा होइन ।
मेरो विचारमा पाँच वर्षमा काठमाडौंलाई स्मार्ट सिटी बनाउन सम्भव छैन । कलंकीमा सय मिटरको अन्डर पास रोड डेढ वर्षसम्म बनाउन सकिएको छैन । साढे दुई वर्ष एक सय मिटरको बाटो बन्न लाग्छ । भने, पाँच वर्षमा ट्रेन चलाउँछु भन्ने दिवा स्वप्न हो । त्यसको अध्ययन गर्न मात्रै दुई-तीन वर्ष लाग्छ । त्यसैले पार्टीहरुले मेट्रो चलाउने नारा दिएर जनतालाई मूर्ख बनाउने काम मात्रै गरिरहेका छन् ।
Posted by admin on May 10 2017. Filed under Breaking News, मुख्य खबर, समाचार. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leavearesponse or trackback to this entry
1 Comment for “सहरलार्इ हाेइन सरहबासीलार्इ स्मार्ट बनाउनुपर्छ : मेयरका उम्मेदवार पवित्र बज्राचार्य”
September 26, 2017 - 11:08 am
zktGLn pretty valuable stuff, overall I think this is well worthabookmark, thanks